Home > Soomaali > Dugsi Sare
Waxay ku xidhan tahay luuqada afka-ingiriiska inta uu ka yaqaan ardaygu. Waxaa laga yabaa in lugula taliyo in uu aado dugsi sare oo u ka helayo caawin xaga luuqada ah. Dhamaan dugsiyada sare ee Minneapolis waxay bixiyaan barashada luuqada afka ingiriiska, halka ay hayaan adeega labada luuqadood. Falsadaas oo lugu dhigayo laba luuqadood waxay kordhinaysaa fahmka uu fahmayo ardaygu waxayabaha loogu dhigayo luuqadiisa inta uu ka baranaynayo luuqada afka ingiirska. Barashada luuqada afka ingiirska waxay diirada saaraysaa horimarinta awooda afka ingriiska ee ardayga, si ay u caawiso in uu ku guulyasto tacliinta dugsiyada markaykanka.
Iskuulada Dadweynaha Minneapolis waxay isticmaali doonaan darajada imtixaanka ardayda ee loo yaqaan TEAE (Test of Emerging Academic English) taagerida lefalka uu hada ku jiro ayaa dadka iskuulka la taliya waxay go'aaminayaa in ardayaga dugsiga sare lugula talinayo in uu u baahan yahay taageero xaga luuqada ah. Imtixaanka TEAE waxaa la qaata bisha Marso waxaana lugu qaataa fasalka todobaad ee iskuulka ardaygu dhiganayo, hadii uu ardaygu uusan qaadan imtixaankan waxaa uu qaadan doonaa imtixaan kale oo loo dajiyay ardayda si loo ogaado ardayga luuqadiisa afka ingiriiska intay gaarsiisan tahay.
Iskuul Caawinta Laba Luuqadood Iskuulada Deegaankaaga
Hadii ardayga lugula taliyo inuu u baahan yahay taageero xaga luuqadaha ama uu u baahan yahay in laga taageero barashada afka ingriiska sida luuqadiisa labaad. Iyada ama isaga waxaa lugu qorayaa iskuul sare oo cayiman iyadoo la eegayo iskuulka ugu fiican ardaygaa iyo meeshuu dagan yahayba. Hadii ardayga lugula taliyo taageero xaga luuqadaha dhex dhexaad ama taageerid barid afka ingriiska oo saraysa. Ardaydu eaxay aadi karaan dugsiyada sare ee Minneapolis oo ay codsadee ama kuwa haya caawimaada luuqada afka ingiriiska ama leh fasalo barasho oo lugu baro luuqada ardayga ito ingiriisi.
Dhamaan ardayda dagan labo mile wixi ka badan ee iskuulka sare lagu qoray bas ayeey helayaan. Su'aal hadaad qabtid wac 612.668.2300. Ogeysiis: Ardaydu haday u jiraan in ka badan hal mile Iskuulka North High waxay helayaan bas uu qaada North High.
Shuruudaha Qalin Jabinta
Si aad u qalin jabiso, una hesho shahaadada galaaska sanadka 2011-2012 iyo wixii ka danbeeya.
- Waa in aad ku baastaa imtixaanka gobolka Minnesota ee laga rabo.
- Waa in aad haysataa ugu yaraan aqoonta fasalada degmada laga dhigo ay ku jiraan kuwa laga rabo.
English/Language Arts, 4 sanadood
Social Studies, 4 sanadood
Math, 3 sanadood
Arts, 1 sanad
Health, 1 sanadood
Physical Education, 1 sanadood
Electives (as needed to fulfill program and graduation requirements)
- Kalaas ann khasab ahayn (in aad qaadato balse ku buuxinaya shuruudaha qalin jabinta)
- Dhamaystir "Hab Nololeedkeyga," manhaj ka caawinaya ardayda qorshe xirfad waxbarsho sare iyo nolosha dugsiga sare ka dib.
*Faahfaahin dheraada, dadka Somaliga ku hadla wxay wici karan 612.668.3704.*
Xaadirinta Goobta A
Dugsiga Sare ee Thomas Edison waa dugsi casri ah arday kastaana wax ka baran karo. Waxaan siinaa arday kasta hanaan, aqoon, khayraad iyo ku dayashada si ay u gaaraan ardaydu hadafyadooda wax barashadooda dugsiga sare ka dambaysa. Maadaama uu ku yaalo goobta taariikhiga ah ee Gilder Lehman, Edison wuxuu kaloo fidiyaa mashaariic baahsan oo ardayda u diyaariya shaqooyinka iyo ganacsiyada horu socodka ah.
Ardaydu waxay kororsadaan, xirfado iyo hab dhaqameedka loo baahan yahay si ay ugu guulaysataan dhinaca qaybta is quxinta ayna u kasbadaan buundooyinka maxadyada bixiya shatiga is qurxinta. Fasalada dhaqaalaha iyo ganacsi abuuridu waxay uga baahan yihiin in ardaydu ay dejiyaan qorshe xeeladeed ah sidii iyagoo iska dhigaya qof iska leh hawlna galiya burkiyeeri adeeg buuxa ah oo kale taasoo hubinaysa iney yeeshaan aasaas ganacsi oo xoogan.
North High School hal ku dhagiisu waa, “Beelo yar yar, Suurto galo Waaweyn.” Waxaan nahay dugsi sare oo xooga saara sidii ay ardaydu ku gaari lahaayeen hadafkooda iyadoo markiiba hal arday la diyaarinayo. Waxaan fidinaa ababin iyo deegaan gargaar leh oo ay dhinac socoto manhaj wax barasho oo adag. North wuxuu kaloo u fidiyaa ardayda fursado nashaad, xarako dhaqdhaqaaq, banooni iyo iyo fursado ay waxbarasho oo kor sii gaynaysa.
Patrick Henry High School hal ku dhagiisu waa “Maanta Hagaagsanaan = Bari Guul.” Hal ku dhagayaga waxaa laga gartaa shaqaalahayaga, ardayda iyo beesha. Hadii aanu nahay Patrick Henry High School, waxaanu qabnaa in dhamaan ardayda oo dhami ay si heer sare ah wax u baraan karaan. Anana hadii aan nahay shaqaalaha waxaan balan qaadaynaa fidinta manhaj adag oo wax barasho oo waafaqsan waxa aan rumaysanahay. Waxaan balan qaadaynaa inaan ardayda siino wixii waqti ama hanaan wax barid khubradeed ah ee loo baahdo si ay ugu baasaan fasaladooda. Waxaan ka codsanaynaa iney taas aan u samaynay ay ardaydu noo gudaan oo ay muujiyaan dadaalkooda ugu fiican inta ay fasalka ku jiraan iyo iney codsadaan oo raadiyaan caawimaad marka loo baaho. Waxaan rumaysanahay hadii aad wadajir u shaqayno inaan siin karno dhamaan ardayda oo dhan wax barashada aduunka ugu saraysa.
Roosevelt - Gawaarida & Dhismaha
4029 - 28th Ave S.
Mashruuca gawaarida &dhismahu wuxuu ku dheehan yahay oo lagu dul dhisaa ardayda danaynteeda dhinaca farsamada gacanta ah, xisaabta, sayniska iyo muhindisnimada ah si loo siiyo iyaga maadooyin ad adag iyo waayo aragnimo ah sida gawaarida loo hagaajiyo, qalfoofyada, dhisida sawar gacmeedka kombuutarka lagu sameeyo. Inta ay u socoto korosiga waayo aragnimada dhabta ah ee xaga farsamooyinka cusub ah, ardaydu waxay kasban karaan buundooyinka ay ku heli haraan shahaadooyinka labada sano- ama afarta sano ah taasoo kabi doonta shaqo helidooda.
Roosevelt – Shaqooyinka Caafimaadka
Mashruuca shaqooyinka dhinaca caafimaadka ah waxaa loogu talo galay in lagu barto fasalada laf dhabarta ah iyadoo xooga la saari daryeelka caafimaadka. Ardaydu waxay xushaan fasalo iyadoo taasoo lagu saleeyo danayntooda kala duwan ee ay danaynayaan shaqooyinka dhinaca caafimaadka ah ee kala duwan waana lagu dhiiri galiyaa iney qaataan fasalada xisaabta iyo sayniska ah si ay xoojiyaan saldhigayada aasaasiga ah ee loo baaahan yahay si loogu najaxo shaqooyinka la xiriira dhinaca daryeelka caafimaadka. Laga soo bilaabo sanadkii 1987, mashruucu wuxuu ka caawiyey ama ka gargaarey ardayda Minneapolis iney si najaxsan ugu diyaar noqdaan wax barashada ka dambaysa dugsiga sare ama ay shaqooyin jagooyin hoose ah ka helaan dhinaca daryeelka caafimaadka marka ay qalin jabiyaanba.
Roosevelt – Shahaadada Caalamiga ah ee Shaqooyinka – Xooga Saarida Caafimaadka
Shahaadadayada Caalamiga ah ee shaqooyinka la xiriirta waa mashruuc horseed u ah aduunka oo dhan (IBCC) oo u fidiya foom tuuga sanadkan fursad ay u geli karaan fasalo banaanka laga soo abaabulay oo ad adag, inta ay ku dhex jiraan oo ay kasbanayaan shahaadada shaqooyinka dhinaca caafimaadka la xiriira.
4029 - 28th Ave S, Minneapolis, MN 55406
Roosevelt High School wuxuu u fidiyaa ardayda deegaan soo dhawayn iyo gargaarba ku dheehan yahay deegaan kaas oo siiya dhamaan ardayda fasalo baabab badan ah, mashruucyo iyo xarakooyin ka baxsan manhajka. Hadafkayagu waa inaan hubsano markii ay qalin jabiyaan in dhamaan ardayda Roosevelt ay diyaar u yihiin jaamacad ama wixii kale ee shaqooyin ah ee ay rabaan.
Waxaa loogu tala galay ardayda American Indian ka ah , All Nations wuxuu isu keenaa khayraadka beesha American Indian ah si looga gargaaro ardaydu iney kuu qalin jabiyaan afar sano gudahood looguna diyaariyo wax barasho ka dambaysa dugsiga sare. Mashruucu wuxu kaloo ardayda ka caawiyaa iney kororsadaan aragti cad oo iyaga ku saabsan marka ay samaysanayaan hadafyo ka dambeeya dugsiga sare. Fasalada waxaa ku jira: afka Ojibwe farshanka dadka wadanka loogu yimid, Taariikhda American iyo sida ay u arkaan dadka wadanka loo yimi taariikhdaas, dadka wadanka loogu yimi makhluuqooda, dhaqaalaha/ dowlada iyo dadka wadankan loogu yimid.
South – Mashruuca Furanaha Ah
Mashruuca furanaha ahi wuxuu xooga saaraa wax barashada baababka kala duwan ka dhaxaysa, arimaha ijtimaaciga ah, iyo sahaminta ardadu ay sahaminayso meeshooda aduunka ay ku leeyihiiin. Ardaydu waxay samaystaan xirfado garaad kordhin ah iyagoo adeegsanaya sahamin, talaabo ardo iyo mas’uuliyada shaqsi, iyagoo isla markaana qadarinaya wada shaqaynta, u kuur galida garaad kordhinta ah, kala duwanaanta iyo beeshaba.
Xaadirnta Goobta B
South High School wuxuu hido iyo dhaqan u lee yahay inuu ardayda gaarsiiyo wax barasho hagaagsan ee dhinaca farshaxanka iyo ciyaaraha. Waana aanu ku faanaa gaaritaanka heerarka fiic fiican ee badan ee ardadayadu gaaraan. Ardaydii hore uga baxday dugsiga waa ay taageeraan dadaalkan waxayna fureen urur samafal. Waa aanu qiimaynaynaa inaan fursad u helno ah inaan ku darno kartidaada qaaliga ah oo xubin ka noqotid beeshayadan.
Xaadirinta Goobta C
Shaqaalaha iyo xubnaha beesha ee kale ee Southwest High School waa ay soo dhaweeyaan dhamaan ardayda oo dhan waxayna ka filayaan mid walba in wax qabadkiisu gaaro heerka ugu fiican ee uu gaari karo, ayna ka faa’iidaystaan manhajkayga wax barshada ee adag ee qaniga ah. Southwest High School wuxuu siiyaa ardayda oo dhan fursado wac wacan, isna markaana wuxuu gacan qabtaa kuwa baahida ugu badani haysato iyadoon markaas waxba laga xumaynayn wax barashada ardayda inteeda kale. Southwest High School aad buu ugu han wayn yahay hidaha iyo dhaqankiisa soo jireenka ah ee ah inuu dhaliyo uuna keeno wax barasho iyo farshaxan lagu daydo.
Washburn High School dib u habayn ayaa lagu sameeyey si uu ugu lug darsado wax barashada ardayda dugsiga sare, taas oo ay si xoogan u qeexdo wax barasho wacan oo dhinaca farshaxanka iyo ciyaaraha kubadaba ah. Macalimiinta iyo shaqaalahuba waxay isku dhaarsadeen oo ay balan qaadaan in wax barshada dhamaan ardayda oo dhan ay ku dadaali doonaan sidii loogu guulaysan lahaa, ayna siiyaan waayo aragnimo wax barasho dugsi sare oo khaas u ah arday walba ayna u diyaariyaan ardayda iney noqdaan xubno wax soo saar leh oo ka mid ah umada aduunka.
Xulasho kale oo Dheeraad ah oo Dugsiyada ku Saabsan
Wuxuu siiyaa gabdhaha dhowr iyo toban jirka ah ee uurka leh ama ilmaha korinaya gacan qabasho khaas ah iyo khayraadka kale ee loo baahan yahay si loo hubsado iney qalin jabiyaan si markaa ay ilmahooda u korsadaan.
10 S. 10th St., Minneapolis, MN 55403
Dugsiga khayraadka baababka wuxuu siiyaa ardayda dadaalka dheeraadka muujiya ee fasalada 1aad ilaa iyo labo iyo 12 aad ku jirta fursad ay uga qabqaataan mashreec wax barasho oo xooga saara fanka iyo “sayniska cagaaran”.
Dugsiga sare ee fanka xorta ah wuxuu siiyaa ardayda wax barashdoodu kale duwan tahay fasalo laga rabo iney ka soo baxaan ardayda ka qalin jabinaysa dugsiyada waxayna kaloo siiyaan wax barasho ka dambaysa dugsiga sare.
U diyaarinta Jaamacada ee Minneapolis
Minneapolis, MN 612.454.0982
Dugsiga u diyaarinta Jaamacada ee Minneapolis wuxuu doonaa inuu kordhiyo ardayda waqooyiga Minneapolis gaaridooda heerka ay rabaan ah iyo ka caawinta xulashada jaamcadaha. Hadafkuna waa in ay ardaydu jaamcad helaan.
Wellstone International High School waxaa loogu tala galay inuu u adeego ardayda da’doodu u dhaxayso 14 ilaa 21 sano oo aan luqada Ingiriiska si fiican u aqoon ama xataa luqadooda hooyo aan si fiican u qori ama akrin akrin.
Qandaraaska Dugsiga ka duwan kuwa Caadiga ah
AIOIC waxay xooga saartaa qorshaynta shaqooyinka iyo xirfadaha guud ee shaqa helida. Dugsigu wuu yare ka duwan kuwa kale oo fasalkiiba arday yar baa dhigata taasoo si khaas ah u caawisa ardayda la qabsan waayey dugsiyada dowlada. Waxaana lagu daraa oo qayb ka ah wax barashada dhaqanka dadka wadan ka loogu yimid.
Mashruuca Heritage wuxuu ku salaysan yahay qawaaniintaan: dhaqan wacnaan dugsiga dhexdiisa ah; manhaj wax barasho oo adag; Aasaaska sayniska iyo farsamada ah; Manhaj iyo hanaan barid Ingiriiska iyo luqadaha kale ah; iyo ka qab galsiin qoyska oo dhan laga qayb galinayo waxbarashada dugsiga.
Kaliya kontan arday ayaa is qori karta dugsiga Loring Nicollet markiiba, fasaladu celcelis ahaan waxay ka kooban yahay 10 ilaa iyo 12 arday; Manhajku wuxuu xooga saaraa barashada ijtimaaciga ah, barashada cilmiga dumarka, iyo dadka laga badan yahay iyo aqoonta qofka laftiisa ku saabsan, halgamaanimada iyo hogaaminta.
Fasalada waxaa loogu tala galay iney ka soo baxaan baahida ardayda ee aragtida, luqada, maqalka iyo wax is barida, fasaladuna waxay isu jiraan kuwa xirfado asaasi ah iyo kuwo jaamacaeed ah; fasalku waa 10 ilaa 12.
Dugsiga MERC ee ka Duwan Kuwa Kale
Mashruucani wuxuu ka caawiyaa ardayda iney helaan shahaadadooda ayna mustabkooda dhisaan iyagoo xooga saaraya is xaadirinta, xaq dhowr, iyo dajinta hadafkooda. Mashruucani wuxuu fidayaa xirfado shaqo u diyaarin ah fasalka ardayda ku jirtaana waa yar tahay oo waa 14-16 arday fasakiiiba.
MERC Dugsiga Dhexe
Wuxuu siiyaa ardayda American Indianka ah wax barasho ku salaysan dhaqanka iyo beesha iyo waayo aragnimo xaga shaqada ah taasoo keenta natiijo waxbarasho oo hagaagsan, fahan dhaqanka iyo mas’uuliyadnimo xubinimo ee beesha.
Guriga masraxa Capri, manhajka waxaa lagu laray fan, farsamada gacanta, iyo barashada sida loo adeego iyadoo is markaasna siinaysa goob amaan iyo xanaanaba leh oo wax lagu barto. waxayna u adeegtaa 180 arday, fasal walbaahina wuxuu ka kooban yahay 16 ilaa18 arday. Dugsiga ka dib waxbarasho madax banaan iyana sidoo kale waa ay heli karaan ardadii xaq u yeelata.
Wuxuu u adeegaa ardayda xooga saara jaamacada iyo shaqo helida waxayna kaloo siisaan fursado ay buundooyinkooda ku soo ceshan karaan. Iyado ay aqoonsan tahay by the North Central Association of Colleges and Schools, manhajku wuxuu xooga saaraa barashada xirfadaha aasaasiga ah iyadoo ay la adeegsanayo farsamooyinka dhabka oo dunida ka jira. ULA waa goob aad ugu haboon ardayda ka hadhay dugsiga, laakiin hada garaadsaday oo fahmay waxa loo baahan yahay si loo guulaysto, una baahan in la siiyo fursad iney ku cadeeyaan cida ay yihiin.
Volunteers of America – Mashruuca Waxbarashada Madaxa Banaan
Volunteers of America – Fursada Dugsiga Sare
Wuxuu u adeegaa kuwa luqada Ingiriiska barto iyo kuwa u dhashay luqadaas oo u baahan iney soo ceshadaan dhibcahooda. Dugsiga hadafkiisu waa inuu kordhiyo ardayda oo dhan xirfadooda farta fasalkuna waa yar yahay.
Waxay bixisaa jadwal furan iyo fasalo arday yar. Dugsiga hadafkiisu waa inuu kordhiyo ardayda oo dhan xirfadahooda farta.
Volunteers of America – Service Adventure Leadership Team (SALT)
SALT waxay bixisaa fasalo ardadiisu yar tahay waxana xooga saartaa wada shaqaynta kooxeedka, iyo xarakada farsamada gacanta, mashruucyada barshada adeegyada. Mashruucan waxaa ka mid ah sahamin la qorsheeyey iyo barashada deegaanka sida buuro fuulida, doon raacida, beero orgaanik ah falida, qaar ka mid ahina waxay u ogol yihiin ardayda iney kasbadaan buundooyinka ka maqan. Mashruucyadayada wax barashada madaxa banaani waxay u fidisaa mashaariic noocaas oo kale ah ardayda oo ay ugu yaraan ku heli karaan 30 dhibcood ardayda aan si joogta ah uga qayb geli karin dugsiga.